Ogologo: 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m
Ogologo: 6.50 mm
Ogologo: 9.19 mm
Ogologo: 9.50 mm
Ogologo: 8.38 mm
Ogologo: 8.56 mm
ụdị njikọ: Ezigbo eri
Nkechi dị mma nwere ike wusie njikọ nke njikọ ya na mkpọchi mkpọchi.
Ngwa ngwa: eji na nyocha ala, igwu ala isi, igwu mmiri, ogbunigwe, igwu mmiri nke ọma, coal na injin na-abụghị ọla siri ike na ọrụ ndị ọzọ na-egwu ala.
Ihe mkpanaka ahụ bụ Shanghai Baosteel STM-R780 (42MnMo7), nke adịghị mfe ka ike gwụ ya ma ọ bụ mebie ya, ma nwee arụmọrụ kwụsiri ike na ntụkwasị obi. A na -eme ka ngwụcha mkpanaka dị ọkụ site na ugboro ugboro, na -ewe iwe ma na -agbakasị, wee lie ya ọkụ ruo awa 12 iji hụ na kọmpụta mkpanaka drill na -arụ ọrụ nke ọma. Ha niile na -eji nkenke mbata CNC lathes na mma ndị eji eme ya maka nhazi eriri, nke na -ahụ na njikọta mkpọchi na -akpachi anya.
Nke gara aga: Nnukwu ikuku ikuku DTH Drill Bit φ90
Osote: Pipe mmiri nke ọma
2 3/8 "Pipe mmiri nke ọma mmiri maka ire ere
3 1/2 Pipe mgbapụta
3.5 mkpọpu mmiri anwụrụ
4 1/2 Pipe mkpọpu mmiri
4.5 Inch malite ịgba Pipe
76mm Mmiri Ọwara mmiri nke ọma
Ọdụ ụgbọ mmiri Api Api Flush Joint Drill Pipe
Mkpanaka mmiri mmiri Api nke emere na China
Api Water Well Drill Rod China Onye na -emepụta ihe
China Supply s135 Drill Pipe Ree
Ddz Drill Pipe Elevator Na 18
Malite ịgba Pipe N'ihi Water ọma Drilling ahaziri Service
Akụrụngwa Nnyocha Ọkụ Maka Ọrịre
Malite ịgba Pipe Mud
Dth malite ịgba Pipe
g105 Api 5dp Pipe Drill
Ezigbo mma Api Water Well Drill Rod
Nc31 Pipe mmiri nke ọma mmiri
Ọkpụkpụ Nc38 Drill
Nc50 Pii Drill Pipe
Nc50 Pipe Drill
Ogologo ogologo ọkpụrụkpụ mkpọpu mmiri 3
Pipe mgbagharị mgbagharị na -atụgharị
Mmiri nke ọma malite ịgba Pipe Core mkpanaka
Mmiri Ọfụfụ Pịkụl Pịkụl Maka Ntanetị
Pipe mmiri nke ọma mmiri ejiri ọla
Mkpanaka mkpanaka oghere dị mma
Mmiri mmiri ọrịre nke ọma na -egwu mmiri